Ireo magazay tsara indrindra amin'ny Fifth Avenue any New York | Vaovao momba ny dia
Ireo fivarotana tsara indrindra ao amin'ny Fifth Avenue any New York
Mariela Carril | | General, New York
New York Io no iray amin'ireo tanàna tsara indrindra eran-tany amin'ny fitsangatsanganana. Manolotra seho isan-karazany sy magazay maro mankafy ny tazo mahazatra an'ny mpanjifa amin'ity taonjato ity.
Ny marina dia raha tianao ny miantsena dia mila mandeha an-tongotra amina lalam-pirenena faha-5. Manan-tantara ny arabe ary eo afovoan'i Manhattan. Ny fivarotana tsara indrindra dia eo anelanelan'ny lalana 39th sy 60th, na dia mazava ho azy aza fa mandehandeha hatrany am-boalohany ka hatramin'ny farany ...
1 Ilay lalam-pirenena faha-5 malaza
3 Fivarotana akanjo
Ilay lalam-pirenena faha-5 malaza
Izy io koa dia fantatra amin'ny hoe "Ny arabe lafo indrindra eto an-tany" ary na dia paradisa fiantsenana aza ny sasany amin'izy ireo dia mety ho lafo sy manokana.
Manana ny maha-mpiaro azy hatramin'ny voalohany izy talohan'ny naha-arabe ara-barotra azy dia lalana honenana izay nihaonan'ireo fianakaviana manankarena indrindra tany New York, tamin'ny taonjato faha-XNUMX sy ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX.
Maro amin'ireo trano kanto sy manan-tantara indrindra ao an-tanàna. Fa ity indray mandeha ity dia tsy fitsangatsanganana mpizaha tany fa miantsena ka andeha hojerentsika izay no fivarotana tsara indrindra amin'ny lalam-pirenena faha-5.
Io no fivarotana lehibe indrindra an'ny marika, ny Apple Store Grand Central. Any amin'ny laharana 767 amin'ny arabe no misy azy ary sokafy isan'andro ny taona. Ilay fivarotana izay tsy mikatona mihitsy ary manana endrika mahafinaritra, ascenseur silinder, tohatra fitaratra ary mpiasa efa ho 300.
Ilay fivarotana no mahita azy rehetra fitaovana marika, rindrambaiko ary serivisy manokana. TENA fanompoana nahazo lalana, azonao atao ny manavao ny findainao, manangona fividianana nataonao an-tserasera sy maro hafa.
Amin'izao fotoana izao dia eo am-panamboarana asa izy io fa na izany aza, ao ambadiky ny vavahady fidirana lehibe, mihidy, mbola miasa ihany.
Mazava ho azy fa ireo marika fivarotana lehibe, akanjo lamaody sy mora vidy, dia etoana tahaka anao H&M, Abercrombie & rakitra, Gap sy Zara, ohatra. Ny kilasika izay tianao hotsidihina, satria matetika izy io dia miseho amin'ny andian-tsarimihetsika sy amin'ny sarimihetsika Saks, hita amin'ny 611.
Amin'ny lafiny fanatanjahantena dia afaka mitsidika ianao Adidas, fivarotana vaovao, fivarotana kiraro ateraka indray NewBalance, niketown, Reebok na The North Face ho an'ny mpitsangatsangana.
Tianao izy vokatra makiazy sy hatsaran-tarehy? Eo i L'Occitane, ilay MAC, Sephora ary Redken ihany.
Raha hanao fividianana manokana dia manana ny fivarotana Hugo Boss, Salvatore Ferragamo, ny firavaka van Cleef & Arpels, Prada na Tiffany. Ary raha tsy mividy ianao, dia mitaky vola tsy misy.
Misy ny marika amin'izao fotoana izao, toa Uniqlo, fa tsy misy tsy fahampiana ihany koa ireo marika kilasika izay misy eo amin'ny arabe mandritra ny am-polony taona maro, toy ny sary famantarana Mino, Akondro Republic, DKNY na Diesel.
Raha New York ihany no tanjonao dia afaka manararaotra ianao ary mitsidika ny Walt Disney Store izay hahitanao ny zava-drehetra momba ny tontolo mahafinaritra an'i Disney na, safidy hafa, dia ny Fivarotana NBA, ho an'ireo mpankafy basikety, nosokafana vao tsy ela.
Ny sasany toeram-pivarotana tsara indrindra eto amin'ity lalana malaza ity ny tanàna: Bergdorf Goodman (754, eo anelanelan'ny 57 sy 58), Saks fahadimy Avenue sy Lord & Taylor (amin'ny laharana 424). Ny voalohany amin'izy ireo dia manam-pahaizana manokana amin'ny hatsaran'ny volo sy ny hoho, ny tarehy, fa tena malaza amin'ny varavarankely kanto izay ataony amin'ny vanim-potoana na hetsika.
Ity fivarotana lehibe na fivarotana lehibe ity nisokatra tamin'ny 1899 nifandray tanana tamina mpifindra monina frantsay fa mpianatra am-pianarana tanora antsoina hoe Goodman no namadika ilay fivarotana kely ho any amin'ny toeram-pitrandrahana volamena.
Ny nifindra tany amin'ny làlana faha-5 dia tamin'ny taona 1928 ary mendrika ny hitsidika azy na dia tranon'ny fianakavian'i Vanderbilt manankarena aza ilay trano.
Ny fitsangatsanganana amin'ny làlambe faha-5 dia afaka manambatra hetsika mihoatra ny iray satria na dia be dia be aza ny fivarotana maro manana karazana fomba fijery hafa ianao. Voalaza teo am-piandohana fa maro amin'ireo tranobe manan-tantara kokoa avy any New York City dia eto ka mety tsara ihany koa ny fihaonana amin'izy ireo.
Amin'ireto tranobe ireto ankehitriny dia misy fivarotana sasany fa ao koa ny kafe, hotely, trano fisakafoanana, tranombakoka na birao tsotra. Misy ny trano afovoan'ilay trano fanaovana lavanty malaza Christie ny, ny Trano Coca-Cola, ny Fanjakana State Building, la Masoivohon'i Frantsa, ny fivarotana mega an'ny Fujifilm na ny Trump Tower.
El Tranombakoka Guggenheim, ny Tranombakoky ny Jiosy, Fivarotana manitra Le Pain Quotidien, ny Tranombakoky ny kanto Metropolitan, ny Moma na tranombakoky ny zavakanto maoderina, ny Hotely Plaza, ny Ivon-toerana Rockefeller miaraka amin'ny promenade sy ny mpandinika azy, ny Katedraly St. Stephen, ny Synagoga faha-5 Avenue, ny NY Public Library izay hita ao amin'ny sarimihetsika Rahampitso…
Handeha amin'ny ankizy ve ianao? Ny ankizy tsy dia tia mandeha loatra ka tsy maintsy omenao valisoa izy ireo ary toerana tsara hanararaotana sy hialana sasatra amin'ny toetr'andro tsara no Fivarotana kilalao FAO Schwarz.
Momba izany ilay fivarotana kilalao asongadin'ny sarimihetsika malaza 80 an-tsary an'i Tom Hanks, Big na te ho lehibe aho araka ny fantatra teo amin'ny tontolo miteny espaniola. Izy io dia manana escalator, piano goavambe ahafahanao mandihy, ny azo atao mamolavola Barbie, amboary fiara Hot Wheels na mividy vatomamy. Harry Potter, Lego, Playmobile ary izay tianao rehetra.
Ao amin'ny tranokalan'ny fizahan-tany any New York dia manana lisitra fivarotana sy ny toerana misy azy rehetra amin'ny sarintany Google Maps ianao. Tena ilaina izy io ary mamela anao handamina fitsangatsanganana mba tsy hahadino anao mihitsy.
Mifalia! Mitsitsia vola, faharetana ary angovo satria tsy misy afa-mandositra ny Avenue 5.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » New York » Ireo fivarotana tsara indrindra ao amin'ny Fifth Avenue any New York
Dobo voajanahary 5 any Espana tonga lafatra mba hangatsiatsiaka amin'ny fahavaratra
Ny fanambin'ny dia mankany Mekka